Maka: umbala | Martech Zone
Intengiso yezePsychology: Ukucinga ngokuchaseneyo nokuziva unefuthe njani kumaxabiso empendulo
NgoLwesine, Novemba 1, 2018 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Umthengi ophakathi ubhencwa kumthamo omkhulu wentengiso rhoqo kwiiyure ezingama-24. Sihambile kumndilili wabantu abadala oveze iintengiso ezingama-500 ngeminyaka yee-1970s ukuya kuthi ga kuma-5,000 2 eentengiso ngosuku namhlanje malunga nezigidi ezibini zentengiso ngonyaka ebonwa ngumntu ophakathi! Oku kubandakanya unomathotholo, umabonwakude, ukukhangela, imithombo yeendaba zentlalo, kunye nokuprinta iintengiso. Ngapha koko, iintengiso ezi-5.3 zeetriliyoni ziboniswa kwi-Intanethi rhoqo ngonyaka kuba sivelisiwe
INzululwazi yeNtengiso yeVidiyo
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 14, 2018 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Kule nyanga sineefotoots ezimbini kunye nabaxhasi, ividiyo yedrone, kunye nevidiyo yobunkokeli… konke ukwenza ngokwezifiso iisayithi zabaxumi kunye nomxholo. Ngalo lonke ixesha sitshintshisa imifanekiso kunye nevidiyo kwiindawo zabathengi kwaye sizitshintsha sifake iifoto zenkampani yabo, abasebenzi babo kunye nabathengi babo… iyayiguqula indawo, kunye nokuzibandakanya kunye notshintsho lwanda. Enye yezinto ezifihlakeleyo esingazichongi xa sibona indawo, kodwa
Isigama soYilo lweGrafiki ethi iiNoobs zihlala zididekile
NgeCawa, ngoFebruwari 19, 2017 NgoMgqibelo, nge-18 kaFebruwari ngo-2017 Douglas Karr
Ndihleke kancinci xa ndifumene le infographic kuba, njengoko kuvela, kufuneka ndiyile uyilo lwegraphic. Kodwa, yeha, kuyamangalisa ukufumanisa ukuba andazi nto kangako malunga nomzi mveliso endingene nzulu kuwo kule minyaka ingama-25 idlulileyo. Ekuzithetheleleni kwam, ndiyadrafta kwaye ndicele imifanekiso Ngombulelo, abayili bethu banolwazi ngakumbi kuyilo lwegraphic kunam. Kuya kufuneka wazi umahluko phakathi kwe-
Iingcebiso zokuLungiswa kwePhepha lokuHamba eliNyusa amaxabiso okuGuqulwa
NgoMgqibelo, ngoJuni 25, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Akukho mathandabuzo okuba ukwandiswa kwamaphepha okufika yinto efanelekileyo kuyo nayiphi na intengiso. IiMonks ze-imeyile zibeke ndawonye le infographic ebanzi yokunxibelelana kwiphepha leengcebiso zokuphucula ukuqhuba iziphumo ezinokulinganiswa. Nazi ezinye izibalo ezinkulu ezinxulunyaniswa nokwenza ngcono iphepha UMongameli u-Barrack Obama uphakamise i-60 yezigidi zeedola ngoncedo lovavanyo lwe-A / B Amaphepha okufika amade anokukwazi ukuvelisa ukuya kuthi ga kwi-220% ekhokelayo ngaphezulu kokuphinda ubize intshukumo kuma-48%
I-2016 yeWebhusayithi yoyilo lweNdlela yokuCinga ngaphambi kokuDala indawo yakho
NgoLwesibini, Januwari 12, 2016 NgoLwesibini, Januwari 12, 2016 Pamela Webber
Sibonile iinkampani ezininzi zihamba zicocekile, amava alula kubasebenzisi bewebhusayithi. Nokuba ungumyili, umphuhlisi, okanye uthanda iwebhusayithi, ungafunda into ngokujonga indlela abenza ngayo. Zilungiselele ukuphefumlelwa! Oopopayi Ukushiya ngasemva, kwiintsuku zokuqala zewebhu, ezazigungxula ii-gifs ezibengezelayo, imivalo yoopopayi, amaqhosha, ii icon kunye nokududa kwehamsters, oopopayi namhlanje kuthetha ukudala ukusebenzisana, ukuphendula isenzo